I-Sassa icela ama-akhawunti kwabahola uR350 – Sivubela intuthuko Newspaper
I-SOUTH African Social Security Agency (Sassa) inxusa izakhamizi zaseNingizimu Afrika ikakhulukazi lezo ezikulungele ukwamukela imali yesibonelo sabangasebenzi se-Covid 19 iSocial Relief of Distress Grant sikaR350 ukuba balekelele ngokuba nama-akhawunti asemabhange ukuze imali ingene kuwona.
Kuthiwa lokhu kuzolekelela ukugwema isiminyaminya esiba semaposini sabantu abathutheleka kuwona bezobheka imali yabo kangangoba abanye baze balale khona benzela ukuba phambili ngosuku lokuholelwa kwabo.
UMnu Paseka Letsatsi okhulumela iSassa kuzwelonke unxuse abantu abafaka izicelo ukubekezela njengoba bamukela umthamo omkhulu wezicelo zabantu ababhalisela ukuthola le mali. Uthe i-system yebo iye igqilazeke ngezinombolo eziphezulu zabantu abafaka izicelo ngakho labo abafakayo izicelo kumele babekezele njengoba nsuku zonke bethola izicelo ezingaphezu kwesigidi.
UMnu Letsatsi uthe bangakujabulela kakhulu uma labo abafaka izicelo bengaba nama-akhawunti ukwehlisa umthamo wabantu kolayini njengendlela yokugcina imibandela yeCOVID-19 enqanda ukunqwabelana ndawonye kwabantu. “Sibe nenhlanhla ngoba inombolo yethu ye-WhatsApp okubhalaliswa ngayo seyisebenza kahle. Sinxusa ukuthi kubhalise ngempela abantu abangasebenzi ukukhulula i-system yethu egqilazekayo ngezicelo eziningi ezinye ezifakwa ngabantu abavele benemeli ebangenelayo. Sinxusa nalabo abanamabhizinisi amancane abangenisela imali ukuba bathembeke bangabangisani nabangatholi lutho nhlobo. Siye sicindezelwe nayizicelo zabantu abathola imihlomulo njenge-Unemployment Insurance Fund (UIF) nabafundi abafunda ngohlelo lwe-National Student Financial Aid Scheme (NSFAS) okungabasemanyuvesi nasemakolishi,” usho kanje.
Kunxuswe abafaka izicelo njengoba le mali izoqala ukutholakala ekupheleni kuka-August ukusebenzisa i-webiste ethi: srd.sassa.gov.za ne-WhatsApp kwethi: 082 046 8553